ကန္တာရ .. အလွမ်းဒီဇင်ဘာ | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
December 23, 2007, 8:27 am Filed under: Poems ကန္တာရ .. အလွမ်းဒီဇင်ဘာ
မျက်ဝန်းလေးတွေမှေးမှိန်ခဲ့ရပြီပေါ့ ဒီဇင်ဘာ …။
Comment by မမခိုင်
December 23, 2007 @ 12:35 pm Reply	ကျနော်တို့ တောသားနှစ်ယောက် နအဖ ပြုတ်ကျရေး လမ်းစဉ်ကို လက်တွေ့ကျကျ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ အတင်းပြောတာနဲ့ အရေမရအဖတ်မရ အလုပ်တွေကို စိတ်ကုန်နေသူတွေကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ http://lightofmyanmar.blogspot.com/
Comment by * In Search of Truth *
December 23, 2007 @ 9:13 pm Reply	ရင်ထဲမအေးမြနိုင်တဲ့မနက်ခင်းတွေမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့အလွမ်းတွေကရောက်ရှိတော့မယ့်ခရစ်စမတ်အတွက်ဟန်ဆောင်ပြုံးလေးတစ်ပွင့်တောင်ကြိုးစားမပန်ဆင်ပေးနိုင်တာ(ငါ)အားတော့နာပါရဲ့ ဒီဇင်ဘာ .. ။ဟုတ်တယ်ညီမလေးရေ။ပြုံးရင်လည်းအားရပါးရဘဲပြုံးချင်ပါရဲ့.အကိုလည်းညီမလေးကဗျာလေးထဲကလိုဘဲခံစားနေရသူပါ
Comment by Saung Yune La (aka) Way
December 24, 2007 @ 2:06 am Reply	လင်းလက်ရေ ကန္တာရ .. အလွမ်းဒီဇင်ဘာ ကဗျာလေးသဘောကျတယ် နှင်းမဝေမြူမစိုင်း အပူလှိုင်းကိုအန်တု နွေကိုရန်ပြုရင်းနဲ. စင်ကာပူက ဒီဇင်ဘာဆောင်း အိမ်မက်တွေတောင် မမက်သေးခင် ဟောင်းဟောင်းသွားတယ် ပူလွန်းလို.ပါညီမရယ်
Comment by J Moe
December 24, 2007 @ 4:48 pm Reply	ကဗျာက ခံစားချက်ပါတယ်။ အသက်ဝင်တယ်။ ဘာကို ဆိုလိုချင်တယ်ဆိုတာ ခံစားချက်ပါပါနဲ့ စပ်ပြထားတယ်။ တစ်ကယ်ကောင်းတယ်။ မြှောက်တာမဟုတ်ဘူး၊ ညီမရေ။ တစ်ကယ်ပြောတာ။
December 25, 2007 @ 10:03 am Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI